किन हाम्रो - मन्डारिन बिहान चिनियाँ विद्यालय
चीन को जीवन्त र प्राचीन भाषा: चीनी। एक चिनियाँ कुराकानी सुन्दै तपाईं सुनिरहेका छन् शब्दहरू, साथ आफ्नो आँखा अगाडि देखा कि छोटो एनिमेसन एक श्रृंखला ट्रिगर भने छ। कुनै आश्चर्य, यसको हान जि (चिनियाँ लिपि) संग, चित्र सबै व्युत्पन्न छन् जो वर्ण, आफ्नै को कथा भन्नु! एकै समयमा तपाईं सही र शक्तिशाली आफैलाई व्यक्त गर्ने क्षमता दिने, भारी लचीलापन लागि अनुमति गर्दा ती चिनियाँ वर्ण भाषा संरचना। र त हामी aural कौशल त विशिष्ट चिनियाँ तरिकामा कुराकानी गर्न सिक्दै लागि अनिवार्य छन् रूपमा, पर्याप्त सुन्न कौशल को महत्व जोड।
डिजाइन 1-2-3 प्रशिक्षण साइकल हाम्रो मा-घर पूर्ण यी र अन्य चिनियाँ भाषा को आधारभूत बुझेका छन्। हामी तपाईंलाई हेर्न र एकै समयमा, हामी सिर्फ प्रयोग गर्न सुरु गर्न, यो को कोर बुझ्न बनाउन भाषा विघटित। प्रयोग र हातमा गो हात बुझ्न जहाँ तपाईं, तपाईंको मातृभाषामा सिकेका जस्तै र छैन?
पूर्व पश्चिम की
"गुरुज्यू, के छ l ogic मन्डारिन को ? ती सबै नियमहरू मलाई दिन, तिनीहरूले मेरो टाउको स्पिन बनाउन! तपाईं मात्र गर्न सक्छ भने यसको तर्क मलाई व्याख्या, म तपाईंलाई थाहा अघि धाराप्रवाह हुनेछ! "
हो, यो शिक्षण विधि, प्रयोग बस बीच पश्चिमी (गैर-चिनियाँ) सोचाइ र चिनियाँ सोचाइ, पश्चिमी भाषा तथा मन्दारिन बीच अंतर पुल सकेन देखिन्थ्यो। बरु बोध भेटी को, नियम प्रस्ताव थिए, र पनि अधिक नियम।
मन्डारिन जीवन विद्यार्थीहरूको लागि सजिलो बनाउन हाम्रो टोली भनिने नयाँ पद्धति संग आए ढिलो गति प्रविध । ढिलो गति प्रविधी साँच्चै थप महत्वपूर्ण मन्डारिन तर्क र देखाउँछ, बस तपाईंलाई मन्डारिन सिकाउँछ एक नियम दर्जनौं सट्टा, र जो विद्यार्थी जस्तो छैन?
तपाईं पहिले थाह तपाईं कामना कुराहरू छन्, राम्रो तरिकाले ढिलो गति प्रविध मेरो लागि तिनीहरूलाई को छ। म समयमा जस्तै तपाईं यसलाई उपयोगी पाउनुहुनेछ आशा गर्छन्!
यो सम्भव हाम्रो विद्यार्थी उच्चतम शिक्षा गुणस्तर निम्त्याउने द्वारा सुन्दर चिनियाँ भाषा फैलाउन हाम्रो मिसन, जो आफ्नो अभिलाषा, पृष्ठभूमि वा उमेर, र जहाँ तिनीहरू छ।
हामी सबै भन्दा राम्रो शिक्षकहरू enlisted र yielding आशाले परे परिणाम, हाम्रो अद्वितीय शिक्षण अवधारणा विकास गरेका त्यसो गर्न सक्षम हुन।
हाम्रो दृष्टि आधारित हाम्रो मुख्य विशेषताहरु निम्नानुसार छन्।
मन्डारिन बिहान दृष्टिकोण
2 1 र2प्लस 1 पाठ्यक्रम
एकै समयमा चिनियाँ परीक्षा पास गर्न तयार गर्दा हाम्रो पाठ्यक्रम, तपाईंले आफ्नो मन्डारिन सिक्ने लक्ष्य हासिल बनाउँछ
अतिरिक्त पाठ्यक्रम परीक्षा लागि तयारी गर्न आवश्यक
चलाख प्रशिक्षण, हाम्रो ढिलो गति प्रविध प्रयोग
हाम्रो ढिलो गति प्रविध साँचो रहँदा आफ्नो सिक्ने गति बढयो दि्छ जो, मन्डारिन को कोर प्रकट
मन्डारिन को कोर प्रकट छैन
आसान कण्ठ, हाम्रो संरचना मानचित्र प्रयोग
हामी आवश्यक भवन ब्लक को एक नम्बर मा चिनियाँ भाषा विघटित। यसले बुझ्न सजिलो र यसैले यो याद गर्न सजिलो बनाउँछ
पुनरावृत्ति गरेर Memorizing
लुत्फ प्रयोग, अभ्यास को धेरै तरिका द्वारा कौशल आफ्नो ज्ञान उत्तेजित गर्दछ
खेल, संगीत, कविता, चलचित्र, गतिविधिहरु EA। मात्र हाम्रो पाठ्यक्रम समयमा तर पनि बन्द क्याम्पस र स्नातक पछि, माथि हाम्रो विधि एउटा महत्त्वपूर्ण भाग बनाउन
एउटा तरिका अभ्यास: मात्र पुस्तकहरू प्रयोग
मानकीकृत शिक्षण विधि
शिक्षा गुणस्तर सुरक्षित गर्न सबै शिक्षकहरू प्रयोग मन्डारिन बिहान शिक्षण विधि
शिक्षण विधि शिक्षकहरू निर्भर: विभिन्न शिक्षकहरू विभिन्न विधि प्रयोग
नित्य पाठ्यक्रम सुधार
विद्यार्थी को प्रतिक्रिया र शिक्षकहरू बढ्दै अनुभवको आधारमा हामी लगातार प्रयोग हाम्रो पाठ्यक्रम सुधार योजना-DO-चेक-अधिनियम चक्र
कुनै समर्थक-सक्रिय पाठ्यक्रम सुधार
तपाईं हाम्रो स्कूल र हाम्रो कार्यक्रम बारे कुनै प्रश्न छ भने, तलको बटन क्लिक गर्नुहोस् र हामीलाई सम्पर्क!
मन्डारिन बिहान चिनियाँ भाषा विद्यालय